Showing २४१-२५० of ९५५ items.
नेकपा एकतामाथिको प्रश्न र २० महिनाको समीक्षा !
वि.सं. ०७५ जेष्ठ ३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकीकरण घोषणा भयो । घोषणासभामा दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले अब एमाले र माओवादी (केन्द्र) खोज्दा नभेटिने र नेकपा मात्र भेटिने बताएका थिए । पूर्व एमालेका माथिदेखि तलसम्मका सबै कमिटीहरू एकता प्रक्रियामा सामेल भएका थिए भने पूर्व माओवादी केन्द्रका गोपाल किरातीलगायतका नेतृत्व पङ्क्तिहरू एकता प्रक्रियामा सहभागी हुन सकेनन् । किरातीले माओवादी (केन्द्र) नै पुनर्गठन गरे । ठूलो हिस्सा प्रचण्डसँग नै आएकाले माओवादी (केन्द्र) फुटेर नेकपामा समाहित भयो भन्ने कुराले त्यति महŒव र चर्चा भने पाएन । यसरी पार्टी एकीकरण घोषणा त भयो, तर २० महिना पुगिसक्दा पन
३८२ पटक पढिएको
पारस काङमाङ राई
डा. बाबुराम भट्टराईको नजरमा माओवादी जनयुद्ध
जनयुद्धका मूल मान्यताविरोधी ओलीको नेतृत्वमा यसका उपलब्धि जोगाउँदै अघि बढ्छु भन्नु खोलामा तलतिर बगाएर माथितिर खोज्नुजस्तै हास्यास्पद होनेपाली इतिहासलाई हल्लाउने माओवादी जनयुद्धको थालनी भएको २५औँ वर्ष प्रवेशको सन्दर्भमा त्यसलाई हेर्ने र बुझ्ने फरक–फरक दृष्टिकोण प्रवाहित हुनु स्वाभाविक छ । दृष्टिविहीनले हात्ती चित्रण गरेको नीतिकथामा झैँ त्यसबारे आगामी एक वर्ष परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक रूपमा विशेष जोडतोडले टकराइरहनेछन् । उदार पुँजीवादी कित्ताले त्यसलाई ‘आतंकवाद’ भन्थ्यो, पुनः भन्नेछ । संसदीय वामपन्थले ‘उग्र–वामपन्थ’ भन्थ्यो, त्यसै भन्नेछ । राजावादीले &lsquo
६३४ पटक पढिएको
धरानको खानेपानी परियोजना वरदान हो कि अभिशाप ?
हिउँदको याम आउन साथ सुन्दर नगरी धरानका जनता माथि पानिको हाहाकारको हुरी मनडराउन शुरु हुन्छ । सुखायामको आगमनसँगै धराने जनताको चिन्ताको विषय खाने पानि बन्न पुग्छ । धरान उप महानगरपालिका र राजनीतिक दलको सम्यन्त्रले खाने पानि समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानको खोजी गरेको लगभग तेह्र चौध वर्ष बित्दासम्म पनि धराने जनता पानीको समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैनन् । विविध समस्यासँग सङ्र्घष गर्दै भए पनि उप महानगरपालिकाले एशियाली विकास बैंकको ऋण शहरी विकाश परियोजना अन्र्तगत खाने पानी परियोजनाको काम सुरु भयो जुन डिसम्बर २०१६ सम्म पुरा गर्ने सहमती थियो तर प्राविधिक समस्याको कारण परियोजना समयमा पुरा हुन सकेन । फेरि उप
अमर इजम लिम्बू
सरकार ! उपकुलपति नियुक्तिमा किन ढिलाई ?
नेपालका आधा दर्जन विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सरकारले नियुक्तिका लागि ठोस कदम चालेको देखिँदैन । देशमा उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका विश्वविद्यालयहरू प्रमुख अभिभावकको अभावमा गतिहीन बनेका छन् । अहिले पूर्वाञ्चल, कृषि तथा वन, नेपाल संस्कृत, पोखरा, मध्यपश्चिम र सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय निमित्त उपकुलपतिका भरमा चल्न विवश छन् । उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनेको समाचार आयो, अब तुरुन्तै उपकुलपति पाऔंला भनेर विश्वविद्यालयहरू आशावादी बने तर निकै महिना पर्खँदा पनि नियुक्त गरिएन । फेरि शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहेको सर्च
५६१ पटक पढिएको
सभामुख चयन र त्यसले उब्जाएको प्रश्न ?
विषय प्रवेश लोकतन्त्रमा राज्य लोक कल्याणकारी हुन्छ । आम नागरिकले त्यसको प्रत्यभूत गरेको हुनुपर्दछ । मूल कानून संविधान टेकेर सहायक ऐन, कानून बनाइएका हुन्छन् र साना तथा ठुला भनी भेदभाव गरिएको हुँदैन । सबैलाई समान हैसियतमा कानून लाग्नुपर्दछ । राणा, पञ्चायत, राजाकालीन व्यवस्थामा सानालाई शोषण, उत्पीडन ठुलालाई अमन चयन थियो । त्यहीकारण बहुसङ्ख्यक जनताहरूले ती व्यवस्थाको विरुद्धमा क्रान्ति, सङ्घर्ष र जन आन्दोलन गरी ढाल्न पुगे । नेपालमा प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्र प्राप्ति भएपछि पनि पुरातन संस्कृतिको अन्त्य भएको छैन । हत्या, आतङ्क, बलात्कार, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अराजकता, मौलाएर गएका छन् । जब राज्यक
सामाजिक खपतका कुरा लिपुलेकदेखि इण्डो प्यासेफिकसम्म
कुरा २०५०/५५ सालतिरको हो । त्यो बेला म सक्रिय राजनीतिक भूमिकामा थिएँ । म सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्छु । राजनीति पनि त्योसँग सम्बन्धित हुने नै भयो । भन्सार छलेर ल्याएका साधारण मानिसका समानका पोका पुलिसले समाउने र भन्सार बुझाउने क्रम चलिरहन्थ्यो । हामी राजनीतिक पार्टीका स्थानीय नेतासँग हारगुहार गर्न मानिस आउने नै भए । भन्सार बुझाएको समान फिर्ता गराउन सकिदैन भन्ने थाहा नहुने कुरै थिएन । तर ती साधारण मानिसको काम गरिदिएको भ्रम पार्न मसमेत उनीहरूलाई लिएर धेरै पटक भन्सार प्रमुख, अधिकृतकहाँ गएको छु । हामीले त प्रयास गरेकै हो सकिएन, दिएनन् के गर्नु भनेर समानवाला मानिसको मन जित्न प्रयास गथ्र्यौैं । तर, य
प्रकाशित मितिः माघ २७, २०७६
के हो एमसिसी ?
नेपाल र अमेरिकाबीच सन् १९४७ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि अमेरिकाले नेपालको विकासमा योगदान गर्दै आएको छ । उसैले दिँदै आएको सहयोगकै निरन्तरताका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेशन (एमसिसी) लाई लिने वा यसभित्र अन्य कुनै स्वार्थ लुकेको छ भन्ने बारे नेपालको राजनीति केही महिनादेखि तरङ्गित छ । सामान्यतयाः सबै देशले आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिएर विदेश नीति तयार गरेका हुन्छन् । विश्वका प्रमुख दुई आर्थिक र सामरिक शक्तिराष्ट्रको रूपमा उदाउँदै गरेका चीन र भारतको बीच भागमा रहनु नै नेपालको महतव तथा संवेदनशीलता हो । नेपाल जस्तो भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा अवस्थित र आर्थिक रूपले
रोशन श्रेष्ठ ‘बेरी’
टुरिजम ट्रयाकः उत्खनन कुर्दै प्रदेश १ को ‘स्कुबा डाइभिङ’ क्षेत्र
प्रदेश १ को साहसिक पर्यटनमा जलजन्य पर्यटन प्रोडक्टहरूमा अहिले खासगरी तीन खाले प्याकेज सञ्चालनमा छन । र्याफ्टिङ, बोटिङ (जेटबोटिङ/मोटर बोटिङ) र ‘एङ्लिङ’ अर्थात् माछा मार्ने खेल । जसमा र्याफ्टिङ तथा बोटिङका कामहरू व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । सुनकोशी, अरुण तथा तमोरमा ¥याफ्टिङ सञ्चालन भएका छन् । सप्तकोशीमा जेटबोटिङ, इटहरीको तातलैयामा मोटरबोटिङ तथा तराई, पहाडका विभिन्न ताल तथा पोखरीमा प्याडल बोटिङका प्याकेजहरू सञ्चालनमा छन् । एङ्लिङका कामहरू व्यक्तिगत स्तरमा धरानका केही युवाहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन । प्रदेश १ मा संभावना भएपनि बजारमा नल्याइएका जलजन्य प्याकेज मध्येको एक
यसरी गराैं धरानकाे पर्यटन प्रवद्धन
सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षको रूपमा मनाइ रहँदा विभिन्न शहरहरूले पनि पर्यटन प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य मात्रामा पर्यटन मैत्री कार्यक्रम गरेको जग जाहेरै छ । भ्रमण वर्षलाई नै लक्षित गरेर धरान उप महानगर पालिकाले पनि घुमौ धरान अर्थात् भिजिट धरान को अवधारणा अनुरूप धरानमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भइरहेका छन् ।जुन कार्यक्रमले परम्परागत रूपकै रमाइलो मेला, सडक महोत्सव, विभिन्न औद्योगिक प्रदर्शनी खाना महोत्सव लगायतका दर्जनाै र शहरबाहिरका उत्पादनका मेलालगायतका दर्जनौ नाममा हुने कार्यक्रमले साँचिकै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरेकै छ त ? सोच्ने बेला आएको छ । धरानमा सञ्चालित ट्राभल एजेन्सी, होटल व्यवसायीदेखि देशका वि
७१० पटक पढिएको
बुद्धको देशमा बुद्धु
अहिले जापानी स्वयंसेवक महिलाहरूले काठमाडौंको सडकमा ट्राफिक नियम सिकाइ रहेका छन् । के बुद्धको देशमा हामी बुद्धू भएर नै हो यस्ता सामान्य कुरामा पनि विदेशीकै भरपर्नुपर्ने ? सबैले भन्छन् ‘ट्राफिक नियम मान’ ट्राफिक नियम कस्तो हुन्छ ? सबैले जानेको भए पो † ट्राफिक नियम मान्ने । अधिकांश मानिसलाई ज्ञानै छैन । के हो ट्राफिक नियम भनेर मात्रै यो ज्यानमारा समस्या समाधान हुनेवाला छैन । सर्वप्रथम, ट्राफिक नियम के हो, जान्नुपर्छ अनि त्यसलाई मान्नु पर्छ । यसलाई जान्नका निम्ति विज्ञान विषय पढेजस्तै धेरै दिमाग खर्चिनु पनि पर्दैन । ‘ट्राफिक नियम’ भनेको गाडी चलाउँदा सडकमा पैदल यात्रा